Xog Cusub oo Laga Helay Xaalada Qalbi Dhagax iyo Shuruuda itoobiya Ku Xirtay (Akhriso Sir la helay) | Allbanaadir
Xog Cusub oo Laga Helay Xaalada Qalbi Dhagax iyo Shuruuda itoobiya Ku Xirtay (Akhriso Sir la helay)
Dec 15, 2017 - Aragtiyood
Warar aan ka helnay magaalada Addis Ababa ee dalka Itoobiya ayaa sheegaya in C/kariin Muuse Qalbi Dhagax oo sirdoonka Itoobiya gacanta ku dhigtay oo lagu haayo maagalada Addis Ababa, isla markaana xaaladiisa caafimaad ay wanaagsan tahay.
Warar sirdoon oo aan helnay xubno ku dhow dhow Itoobiya oo la xaqiijin karin sugnaanshahooda hase ahaatee waxay sheegayaan in Qalbi Dhagax lagu haayo xabsi ku yaal Addis Ababa, iyadoo shuruudo sirdoonka iyo dowladda Itoobiya hordhigeen uu diiday inuu qaato kuna dhaqmo.
Shuruudaha sirdoonka Itoobiya hordhigeen kuna cadaadiyeen Qalbi Dhagax ayaa waxaa ka mid ah inuu shaaciyo in ururka uu ka tirsanaa ee ONLF ay yihiin urur argagixiso oo bulshada DDSI u horseeday dhibaatooyin shacabkana la rabin nolol iyo horumar iyo in uu burburay ururka.
Xubnaha aanu warkaanu ka helnay ayaa sheegay in Qalbi Dhagax uu diiday shuruudahaasi hase ahaatee uu ogolaaday inuu bari ka yahay ka mid ahaanshaha ONLF.
Ishaanu aanu warka ka helnay ayaa sheegaysa in wax dhibaato ah loo geysan Qalbi Dhagax, sababtuna waxaa lagu micneeyay in beesha caalamka iyo guud ahaan bulshada Soomaaliyeed ay isha ku hayso habka dowladda Itoobiya ula dhaqanto Qalbi Dhagax.
Madaxda Dowladda Federaalka Somalia ayaa Itoobiya cadaadis ku saartay in hab wanaagsan ula dhaqmaan Qalbi Dhagax maadaama ay ka diiday Itoobiya in lasoo celiyo si shacabka Soomaaliyeed u degaan xiisadii ka dhalatayna oo mucaarado badan kala kulmeen madaxda dowladda loo qaboojiyo.
Dhiibista ay dowladda federaalka dhiibtay Qalbi Dhagax ayaa dhalisay buuq siyaasadeed iyo mid bulsho, taasoo hoos u dhigtay taageeradii dowladda Somalia rajadii shacabka ka qabeen.